पती र छाेरीसंग खुसी साट्दा ट्रोल भइन् सन्नी लियोन ! « Online Tv Nepal
पती र छाेरीसंग खुसी साट्दा ट्रोल भइन् सन्नी लियोन !
Published : 19 June, 2018 7:20 pm
अभिनेत्री सन्नी लियाेन बारम्बार विवादमा अाउने गर्छिन् । उनै सन्नी अहिले फेरी एक फाेटाेका कारण विवादमा तानिएकी छिन् । सन्नीका श्रीमान् डेनियल वेबरले आइतबार फादर्स डेको मौकामा आफ्नो, सन्नी र छोरी निशाको बाेल्ड तस्बिर इन्टाग्राममा सेयर गरे । उक्त फोटोमा आमा-छोरीले कुनै लुगा लगाएको देखिँदैन् । यद्यपि, आमाको संवेदनशील अंग छोरीको शरीरले छोपिएको छ । डेनियलले चाहीँ तल जिन्स लगाएका छन् र माथी नांगै छन् ।